आफैंले नियुक्त गरेका नेपाल एयरलाइन्सका कार्यकारी अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट
काठमाडौ,(प्रस): सोमबार नेपाल एयरलाइन्सको ६१ औं वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि थिए। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि भएको दुर्लभ अवसर भएको भन्दै कर्मचारीहरू प्रशंसा गरिरहेका थिए। स्वागतमा बोल्ने र ट्रे्ड युनियनका प्रतिनिधिहरूले पनि ओलीको खुबै प्रशंसा गरे। तर जब ‌ओली भाषण गर्न गए। तब ताली कम सन्नाटा बढी छायो। उनले एयरलाइन्सको भद्रगोल व्यवस्थापनप्रति खुलेर आलोचना गरे।
कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि जहाजको ग्राउन्डेडसम्मका कुरामा व्यवस्थापनको कमजोरी देखाएका ओलीले निकै प्राविधिक पक्षमा पनि व्यवस्थापनको आलोचना गरे।
पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैं लिएका प्रधानमन्त्रीले एयरलाइन्सको अहिलेको हविगत रहे सरकारले संस्थाको उद्धार गर्ने तर व्यक्तिको ठेक्का नलिने स्पष्ट सन्देश दिए।
अहिले नेपाल एयरलाइन्सको नेतृत्वमा मदन खरेल छन्। खरेल कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा छन्। यी खरेल तिनै हुन् जसलाई ओली आफैंले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको असन्तुष्टिका बीच नियुक्त गरेका थिए।
एउटा कार्यकारी भएको अवस्थामा दोहोरो शक्तिका रूपमा २०७५ असोजमा खरेललाई ल्याएका ओली १० महिनामै चरम असन्तुष्ट भइसकेका छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै खरेललाई लक्षित गर्दै पटक/पटक प्रश्न गरेका थिए।
ओलीले सबभन्दा पहिला नेपाल एयरलाइन्सको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यसमा आफ्ना साथीले भनेको कुरालाई जोडेर निगम व्यवस्थानलाई चेतावनी पनि दिए।
'म एयरपोर्टतिर जाँदा आउँदा नेपाल एयरलाइन्सको लोगो भएका जहाज देख्छु। यो देख्दा आहा! कति धेरै जहाज भन्ने लाग्थ्यो। यही कुरा मैले एकजना साथीलाई भने। उहाँले भन्नुभयो- हो नि हजुर जहाज धेरै छन् तर आकाशमा होइन जमिनमा मात्र। उहाँले सही भन्नुभएको थियो।'
अहिले जहाज भएर पनि त्यसको सञ्चालन कार्ययोजना नहुँदा संस्था घाटामा गएको उनको भनाइ छ। नेपाल एयरलाइन्समा संस्था बाहेक सब नाफामा गएको तर जहाज र संस्था दोषका भागिदार भएको भन्दै आक्रोश पोखे।
'जहाजको के दोष, यहाँ सबै नाफामा छन्, केबल संस्था र जहाज बाहेक। जहाज चलाउन, व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने त्यहीअनुसारको विकल्प चाहियो। तर खाली पैसामात्र भनेर सरकारले दिन सक्दैन' उनले भने।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ जहाज भाडामा दिने विषयमा कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्।
नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष खरेलले यसअघि पनि चिनियाँ जहाज चलाउन नसकिने अवस्था आएको बताउँदै आएका थिए। तर आज भने ट्र‍ेड युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगीले सो कुरा निकालेका थिए। उनले नेपाल एयरलाइन्सले चलाउन नसक्ने भए ती जहाज कि नेपाली सेना वा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
त्यसको जवाफमा ओलीले आफ्नो व्यवस्थाकीय असफलतालाई ढाकछेप गर्न यस्ता कुरा गर्न नहुने बताए।
'यी जहाज निजी क्षेत्रले लिए नाफा हुने भए हामीले किन नसकेको? कि यी जहाज सरकारीसँग ज्ञानी हुँदैनन्? निजीसँगमात्र सन्तुष्ट हुने हुन् र ? फेरि सेनालाई किन दिने? कारण के हो? हामीसँग पाइलट नभएर? कि थोत्रा भएर? थोत्रा भएको भए के सेना कवाडीखाना हो? कि बन्चरै डाँडा हो काम नलागेका जति राख्ने ? कि ती जहाज जंगी पोशाकमा मात्र उड्छन् ? केही त कारण हुनुपर्‍यो' ओलीले भने।
अहिलेको व्यवस्थापनले जहाजको पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्न पाइलट व्यवस्था,गन्तव्य थप जस्ता कुरामा ध्यान नदिइ केबल पैसामात्र मागिरहेको भन्दै पटक/पटक पैसा दिन यही अवस्थामा नसकिने बताएका थिए।
Times 1029310	Visited.